Matongerwo eNyika, 10 Ndira 2016
Svondo 10 Ndira 2016
Ndira 08, 2016
Bhiri reMutemo weRunyararo neKuregererana Roshoropodzwa
Sachigaro vesangano reNational Transitional Justice Working Group, VaALec Muchadehama, vanoti sangano ravo harisi kufara nebhiri rekuumba komisheni ichange ichiona nezverunyararo pamwe nekuregererana munyika, kana kuti Peace and Reconciliation Commission Bill.
Nhengo dzeMDC-T Dzoratidzira paMutasa GMB Dzichiti Chibage Ngachipihwe Munhu Wese Pasina Rusarura
Nhengo dzebMDC-T dzinodarika zana dzaratidzira pamuzinda weGrain Marketing Board, GMB, kudunhu reMutasa kuManicaland dzichinyunyuta nekunyimwa kwadziri kuitwa chibage nefotoreza.
Ndira 07, 2016
Nyanzvi Dzoita Maonero Akasiyana Gore ra2016
Vanoongorora zvematongerwo enyika vane maonero akasiyanasiyana panyaya yemamiriro achange akaita zvinhu munyika munyaya dzezvematongerwo enyika mugore ra2016
Vakasungwa Mumhirizhonga kuChitungwiza Vanobvisa Mari yeChibatiso
Kuratidzira uku kwakatangwa nevemakombi avo vakenda kunosiya motokari dzavo pamahofisi ekanzuru vachiti vainge vasiri kufara nenyaya yekuwedzerwa kwemari yemutero yavanobhadhara kukanzuru.
ZUJ Inoshora Kusungwa kweVatori veNhau veNewsday
Mapurisa emuHarare neChina vakasunga mutevedzeri wemupepeti mukuru webepanhau reNewsday, Nqaba Matshazi, uye mutori wenhau, Xolisani Ncube, vachipomerwa mhosva yekunyora manyepo.
Misoro yeNhau, China 07 Ndira, 2016
Ndira 06, 2016
Vashandi veHurumende Vanoti Musangano Wavo naVaKasukuwere Hauna Chawaburitsa
Sachigaro weApex Council, VaRichard Gundani, vanoti hapana chabuda mumusangano wavo naKasukuwere sezvo hurumende yaramba kuzvipira kuti ichavabhadhare nenguva mari dzemihoro nemabhonasi.
Kuoma kweZvinhu Kumusha Kworwadza Vari Kunze
Vari kunze kwenyika vanoti mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nehupfumi kuZimbabwe ari kuvakanganisa zvakanyanya, sezvo zvichiguma zvowedzera mitoro iri pamapfudzi avo wekuriritira mhuri
Misoro yeNhau – Chitatu, Ndira 6, 2016
Hurumende Yoomesera Vatori veNhau Vanotapa Zvinoitika Muparamende
Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa - Zimbabwe, VaKumbirai Mafunda, vanoti sangano ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa neparamende uye semaonero avo izvi hazvifaniri kunge zvichiitika.
Vakawanda Voshora Mhirizhonga Yakaitika kuChitungwiza neChipiri
Vagari vekuChitungwiza nemasangano akazvimirira vashora zvakadzama muitiro wemapurisa wakasiya vanhu vakawanda vakuvara neChipiri.
Ndira 05, 2016
Chobvondoka muChitungwiza Mapurisa Achirwisana neVatyairi veMakombi!
Yanga iri bata murefu bata mupfupi muChitungwiza neChipiri apo vatyairi vemakombi vange vachirwisana nemapurisa.